जसको मृ’त्युले पूरै अमेरिका ज’लिरहेछ, उनी कोरोना संक्रमित थिए ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/जसको मृ’त्युले पूरै अमेरिका ज’लिरहेछ, उनी कोरोना संक्रमित थिए !
काठमाडौं। अफ्रिकन अमेरिकी मू’लका नागरिक ज’र्ज फ्लो’एडको प्रहरी हि’रासतमा मृ’त्यु भएपछि अहिले पूरै अमेरिका ज’लिरहेको छ । यहाँ रं’गभेदविरोधी आ’न्दोलन उ’त्कर्षमा छ । पछिल्लो समय उनको मृ’त्युको बारेमा अनुसन्धान हुँदै जाँदा उनी कोरोनाभाइरस संक्रमित भएको खु’लासा भएको छ ।
हे’न्नेपिन का’उन्टी मे’डिकल ए’ग्जामिनरको अ’फिसले जा’री गरेको पो’ष्टमर्टम रि’पोर्टमा उनलाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो। ४६ वर्षिय फ्लो’एडमा गत अ’प्रिल ३ मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको रि’पोर्टले जनाएको छ।उनको मृ’त्युपछि पनि मि’नीसोटाको स्वास्थ्य विभागले स्वा’ब परीक्षण गरेको थियो। त्यसमा पनि कोरोनाभाइरस पोजिटिभ देखिएको मे’डिकल ए’ग्जामिनरका प्रमुख ए’न्ड्रिउ ए’म बे’करले बताए।